“အဲကွန်းလည်းဖွင့်​ချင်​တယ်​ မီတာခလည်း သက်​သာချင်​သူ များအတွက်​” | News Reporter
Home News “အဲကွန်းလည်းဖွင့်​ချင်​တယ်​ မီတာခလည်း သက်​သာချင်​သူ များအတွက်​”
“အဲကွန်းလည်းဖွင့်​ချင်​တယ်​ မီတာခလည်း သက်​သာချင်​သူ များအတွက်​”
အဲကွန်း Remote Control ကနေအပူချိန်ကိုအနိမ့်ဆုံးဖြစ်တဲ့၁၆သို့မဟုတ်၁၈ဒီဂရီလောက်ထားလိုက်ရင်၂၅ဒီဂရီမှာထားတာထက် ပိုအေးတဲ့လေတွေထွက်လာမယ်၊အခန်းလည်းမြန်မြန်ပိုအေးမယ်လို့လူအများစုကထင်ကြပါတယ်။အမှန်ကလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။
အဲကွန်းကထွက်လာတဲ့ လေဟာကိုယ်ထားထားတဲ့အပူချိန်နဲ့မဆိုင်ဘဲတစ်သမတ်တည်းပါ။ဒါဟာအဲကွန်းတစ်ခုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ မသိလို့ဖြစ်ပါတယ်။
လူအများနားလည်အောင် Technical Terms တွေကို ရှောင်ပြီးအလွယ်ပဲ ပြောလိုက်ပါတော့မယ်။ဒီခေတ်မှာအသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ Split Type Air Conditioner တွေမှာ Indoor Unit နဲ့ Outdoor Unitရယ်နှစ်ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။
အဓိကအနေ့ Indoor Unitမှာ Evaporator နဲ့ Outdoor Unit မှာ Compressor နဲ့ Condenser တွေပါဝင်ပါတယ်။
Evaporatorဟာ​လေထုထဲက​ရေငွေ့တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဖြစ်ပြီး Compressor နှင့် Condenser တွေကလေထဲကအပူတွေကိုဖယ်ရှားပြီး လေကို​အေးမြသွားအောင်လုပ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အဲကွန်းရဲ့ Indoor Unit ဟာအခန်းတွင်းက
လေကိုစုပ်ယူလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလေထဲမှာပါလာတဲ့ ရေငွေ့တွေကိုEvaporatorလို့ခေါ်တဲ့ကိရိယာနဲ့ဖယ်ရှားပြီးအဲကွန်းကရေတွေတတောက်တောက်ကျတာဟာအဲဒီလိုဖယ်ရှားခံရတဲ့အခန်းတွင်း​လေထုထဲက ရေငွေ့တွေပါပဲ) ခြောက်သွေ့သွားတဲ့ လေကို Compressor နဲ့ Condenser တွေကို ဖြတ်သန်စေပြီး​အေးမြခြောက်သွေ့တဲ့​လေကိုပန်မှုတ်သွင်းလိုက်ပါတယ်။
ဥပမာအပြင်မှာ၃၅ဒီဂရီရှိနေချိန်အခန်းတွင်းမှာအဲကွန်းကို၂၅ဒီဂရီဆက်တင်လုပ်ထားမယ် ဆိုရင်၂၅ဒီဂရီကိုမရောက်မချင်းအဲကွန်းဟာအခန်းတွင်းမှာရှိတဲ့​လေထုကိုစုပ်ယူလိုက်၊ လေထဲက​ရေငွေ့နဲ့အပူကိုဖယ်ရှားပြီး အေးမြတဲ့ လေကိုအခန်းတွင်းကိုပြန်မှုတ်သွင်းလိုက်နဲ့အခန်းတွင်းကအပူချိန်ကိုတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာစေပြီး အေးမြလာစေပါတယ်။
လူ့အရေပြားဟာအပူချိန်၂၅ဒီဂရီလောက် အထိသက်သောင့်သက်သာရှိရှိ နေနိုင်တာမို့အဲကွန်းကို၂၅ဒီဂရီမှာဆက်တင်လုပ်ထားခြင်းဟာကိုယ့်အိမ်ခန်းထဲရေခဲတိုက်ဖန်တီးထားခြင်းထက်မီတာခကိုများစွာသက်သာစေသလို…
ပြင်ပအပူချိန်နဲ့များစွာကွာတဲ့အခန်းတွင်းအပူချိန်မှာအသားကျသွားပြီဖြစ်တဲ့ ရေခဲတိုက်သမားများထက်ပြင်ပအပူချိန်ကိုပိုပြီးခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့အပြင်အတွင်းအပြင်အပူအအေးကွာခြားလွန်းလို့အခန်းပြင်ထွက်တာနဲ့ လေပူမိပြီး
လေတိုက်နှုန်းဟာလည်းFeels-like Temperature ကိုသက်ရောက်တာကြောင့်ပန်ကာလည်ပတ်နှုန်းများရင်ပိုအေးတယ်ထင်ပြီးတစ်ဆုံးတင်ထားကြတာများကြပါတယ်
ပန်ကာလည်နှုန်းမြင့်လေမီတာစားနှုန်း မြင့်လေမို့စဖွင့်ဖွင့်ချင်း Fan Speedကိုတင်ချင်တင်ပြီးအေးလာတာနဲ့အနိမ့်ဆုံးမှာပြန်ချထားခြင်းဟာလည်းကျန်းမာရေးအတွက်ရောမီတာခသက်သာရေးအတွက်ရောအထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။
ချမ်းသာတဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေ၊ မြောက်အမေရိကနိုင်ငံတွေ၊အာရှကဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့ ဟာအလွန်အေးတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်လို့သူတို့နိုင်ငံသားတွေဟာအပူကိုအရမ်းကြောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဆီကဘတ်စ်ကားတွေ၊ လေယာဉ်ပျံတွေ၊ရုံးတွေ ကျောင်းတွေမှာ နွရာသီမှာတောင်အဲကွန်းကိုအပူချိန် ၂၅ဒီဂရီလောက်မှာပဲချိန်ထားလုပ်ထားပါတယ်။
ရုံးခန်းတွေအိမ်တွေမှာလည်းအဲကွန်းကို ၁၆ ဒီဂရီအထိအနိမ့်ဆုံးထားပြီး တောင်ကြီးကလောရာသီဥတုမျိုးကိုဖန်တီးထားကြပါတယ်။အမေရိကားရောက်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကလှမ်းပြောပါတယ်။သူတို့ဆီမှာကပူလို့  အေးလို့ဆိုပြီး တော်တန်ရုံအဲကွန်းကိုမသုံးကြဘဲမီတာခကိုချွေတာကြတယ်တဲ့။
ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကိုအရာရာနတ်ဘုံနတ်နန်းလို့ထင်နေပေမဲ့တကယ်ကမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့မှာလည်းသူတို့ရတဲ့လခနဲ့လူနေမှုစရိတ်ကြီးမြင့်ခြင်းဒဏ်ကိုခံနိုင်အောင်စစ်စစ်စီစီ ချွေချွေတာတာသုံးကြရတာပါ။အမှန်က လူ့အရေပြားဟာ ၂၀ နဲ ၂၅ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ကြားကအပူချိန်မှာ နေလို့ထိုင်လို့အကောင်းဆုံးပါ။
ဒီတော့ အဲကွန်းကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာ၂၅ဒီဂရီမှာအပူချိ န်ကိုထိန်းညှိထားလိုက်ခြင်းဟာမီတာခ အရမ်းသက်သာသွားသလိုကျန်းမာရေးကိုလည်းမထိခိုက်စေတော့ပါဘူး။
အဲကွန်းကို တောက်လျှောက်သုံးပြီးမီတာခကို ဒီထက် လျှော့ချချင်သေးတယ်ဆိုရင်လည်း ရပါသေးတယ်။ဒီနေရာမှာအဲကွန်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုထဲမှာ Compressor နဲ့ Condenser တွေဟာ လေရဲ့ပကတိအပူချိန်ကိုဖယ်ရှားပြီး အေးမြအောင်လုပ်ပေးသလို Evaporator က လေထုထဲက ရေငွေ့ကိုဖယ်ရှားပြီးအခန်းထဲကဘအပူတွေကိုဖယ်ပေးတာပါ.
အခုခေတ်အဲကွန်းတွေမှာ Cool Mode သာမက Dry Modeဆိုတာပါ ပါပါတယ်။
Cool Modeမှာ Evaporator Compressor နဲ့ Condenser တွေအားလုံးအလုပ်လုပ်ပြီး အခန်းတွင်းက လေကိုအေးမြစေပါတယ်။Dry Mode မှာတော့ လေထုထဲကရေငွေ့ကိုဖယ်ရှားပေးဖို့Evaporatorသာအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု ပိုနည်းပါတယ်။
ဒီတော့အခုလိုအပူချိန်သိပ်မမြင့်လှသော်လည်းပူအိုက်စွတ်စိုထိုင်းမှိုင်းတဲ့မိုးရာသီမှာအဲကွန်းကို Cool Mode နဲ့မသုံးဘဲ Dry Mode ကို ၂၅ ဒီဂရီလောက်မှာထားပြီးFan Speed ကိုလည်း လျှော့ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်အခန်းတွင်း ရေငွေ့ပါဝင်နှုန်းကို လျှော့ချပေးတဲ့အတွက်အခန်းတွင်းမှာမှိုမတက်ခြင်း​ရောဂါပိုးမွှားတွေမပေါက်ပွါးနိုင်ခြင်း
လူ့အရေပြားက​​ချွေးတွေကိုအလွယ်တကူအငွေ့ပြန်စေလို့ ​အေးမြမှုကို Cool Mode နဲ့အအေးခံထားသည့်အလားခံစားရစေခြင်း
၂၅ ဒီဂရီလည်းဖြစ်ပြန် Dry Mode လည်းဖြစ်ပြန်လို့မီတာခသက်သာခြင်းစတဲ့အကျိုးတွေကိုခံစားရမှာဖြစ်ကြောင်း လက်တွေ့  နှိုင်းယှဉ် စမ်းသပ်နိုင်စေဖို့စိုးလျှပ်စစ်မှမျှဝေလိုက်ရပါတယ်.
အဲယားကွန်းကို16မှာထားတာရင်လဲဒီလေပဲ 30 မှာထားလဲဒီလေပဲထွက်ပါတယ်နော်.အလုပ်လုပ်ချိန်ပိုကြာသွားလို့ပိုအေးတာပါ.အခြားသောလျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအထာသိပြီးသတိထားအသုံးပြုရင်လျှပ်စစ်ကို ချွေတာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အသေအချာ ရှင်းပြပေးတဲ့ မူရင်းရေးသားသူ ကိုရွှေယုကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Credit Ko Shwe Yu
Credit SOE Electronic
အဲကှနျး Remote Control ကနအေပူခြိနျကိုအနိမျ့ဆုံးဖွဈတဲ့၁၆သို့မဟုတျ၁၈ဒီဂရီလောကျထားလိုကျရငျ၂၅ဒီဂရီမှာထားတာထကျ ပိုအေးတဲ့လတှေထှေကျလာမယျ၊အခနျးလညျးမွနျမွနျပိုအေးမယျလို့လူအမြားစုကထငျကွပါတယျ။အမှနျကလုံးဝမဟုတျပါဘူး။
အဲကှနျးကထှကျလာတဲ့ လဟောကိုယျထားထားတဲ့အပူခြိနျနဲ့မဆိုငျဘဲတဈသမတျတညျးပါ။ဒါဟာအဲကှနျးတဈခုဘယျလိုအလုပျလုပျလဲ မသိလို့ဖွဈပါတယျ။
လူအမြားနားလညျအောငျ Technical Terms တှကေို ရှောငျပွီးအလှယျပဲ ပွောလိုကျပါတော့မယျ။ဒီခတျေမှာအသုံးအမြားဆုံးဖွဈတဲ့ Split Type Air Conditioner တှမှော Indoor Unit နဲ့ Outdoor Unitရယျနှဈပိုငျးပါဝငျပါတယျ။
အဓိကအနေ့ Indoor Unitမှာ Evaporator နဲ့ Outdoor Unit မှာ Compressor နဲ့ Condenser တှပေါဝငျပါတယျ။
Evaporatorဟာလထေုထဲကရငှေတှေ့ကေိုဖယျရှားဖို့ဖွဈပွီး Compressor နှငျ့ Condenser တှကေလထေဲကအပူတှကေိုဖယျရှားပွီး လကေိုအေးမွသှားအောငျလုပျပေးဖို့ဖွဈပါတယျ။
အဲကှနျးရဲ့ Indoor Unit ဟာအခနျးတှငျးက
လကေိုစုပျယူလိုကျပါတယျ။အဲဒီလထေဲမှာပါလာတဲ့ ရငှေတှေ့ကေိုEvaporatorလို့ချေါတဲ့ကိရိယာနဲ့ဖယျရှားပွီးအဲကှနျးကရတှေတေတောကျတောကျကတြာဟာအဲဒီလိုဖယျရှားခံရတဲ့အခနျးတှငျးလထေုထဲက ရငှေတှေ့ပေါပဲ) ခွောကျသှသှေ့ားတဲ့ လကေို Compressor နဲ့ Condenser တှကေို ဖွတျသနျစပွေီးအေးမွခွောကျသှတေဲ့လကေိုပနျမှုတျသှငျးလိုကျပါတယျ။
ဥပမာအပွငျမှာ၃၅ဒီဂရီရှိနခြေိနျအခနျးတှငျးမှာအဲကှနျးကို၂၅ဒီဂရီဆကျတငျလုပျထားမယျ ဆိုရငျ၂၅ဒီဂရီကိုမရောကျမခငျြးအဲကှနျးဟာအခနျးတှငျးမှာရှိတဲ့လထေုကိုစုပျယူလိုကျ၊ လထေဲကရငှေနေဲ့အပူကိုဖယျရှားပွီး အေးမွတဲ့ လကေိုအခနျးတှငျးကိုပွနျမှုတျသှငျးလိုကျနဲ့အခနျးတှငျးကအပူခြိနျကိုတဖွညျးဖွညျးကဆြငျးလာစပွေီး အေးမွလာစပေါတယျ။
လူ့အရပွေားဟာအပူခြိနျ၂၅ဒီဂရီလောကျ အထိသကျသောငျ့သကျသာရှိရှိ နနေိုငျတာမို့အဲကှနျးကို၂၅ဒီဂရီမှာဆကျတငျလုပျထားခွငျးဟာကိုယျ့အိမျခနျးထဲရခေဲတိုကျဖနျတီးထားခွငျးထကျမီတာခကိုမြားစှာသကျသာစသေလို…
ပွငျပအပူခြိနျနဲ့မြားစှာကှာတဲ့အခနျးတှငျးအပူခြိနျမှာအသားကသြှားပွီဖွဈတဲ့ ရခေဲတိုကျသမားမြားထကျပွငျပအပူခြိနျကိုပိုပွီးခံနိုငျရညျရှိတဲ့အပွငျအတှငျးအပွငျအပူအအေးကှာခွားလှနျးလို့အခနျးပွငျထှကျတာနဲ့ လပေူမိပွီး
လတေိုကျနှုနျးဟာလညျးFeels-like Temperature ကိုသကျရောကျတာကွောငျ့ပနျကာလညျပတျနှုနျးမြားရငျပိုအေးတယျထငျပွီးတဈဆုံးတငျထားကွတာမြားကွပါတယျ
ပနျကာလညျနှုနျးမွငျ့လမေီတာစားနှုနျး မွငျ့လမေို့စဖှငျ့ဖှငျ့ခငျြး Fan Speedကိုတငျခငျြတငျပွီးအေးလာတာနဲ့အနိမျ့ဆုံးမှာပွနျခထြားခွငျးဟာလညျးကနျြးမာရေးအတှကျရောမီတာခသကျသာရေးအတှကျရောအထောကျအကူ ဖွဈစပေါတယျ။
ခမျြးသာတဲ့ဥရောပနိုငျငံတှေ၊ မွောကျအမရေိကနိုငျငံတှေ၊အာရှကဂပြနျတို့ကိုရီးယားတို့ ဟာအလှနျအေးတဲ့နိုငျငံတှဖွေဈလို့သူတို့နိုငျငံသားတှဟောအပူကိုအရမျးကွောကျပါတယျ။ဒါပမေဲ့သူတို့ဆီကဘတျဈကားတှေ၊ လယောဉျပြံတှေ၊ရုံးတှေ ကြောငျးတှမှော နှရာသီမှာတောငျအဲကှနျးကိုအပူခြိနျ ၂၅ဒီဂရီလောကျမှာပဲခြိနျထားလုပျထားပါတယျ။
ရုံးခနျးတှအေိမျတှမှောလညျးအဲကှနျးကို ၁၆ ဒီဂရီအထိအနိမျ့ဆုံးထားပွီး တောငျကွီးကလောရာသီဥတုမြိုးကိုဖနျတီးထားကွပါတယျ။အမရေိကားရောကျသူငယျခငျြးတဈယောကျကလှမျးပွောပါတယျ။သူတို့ဆီမှာကပူလို့ အေးလို့ဆိုပွီး တျောတနျရုံအဲကှနျးကိုမသုံးကွဘဲမီတာခကိုခြှတောကွတယျတဲ့။
ဖှံ့ဖွိုးပွီးနိုငျငံတှကေိုအရာရာနတျဘုံနတျနနျးလို့ထငျနပေမေဲ့တကယျကမဟုတျပါဘူး။သူတို့မှာလညျးသူတို့ရတဲ့လခနဲ့လူနမှေုစရိတျကွီးမွငျ့ခွငျးဒဏျကိုခံနိုငျအောငျစဈစဈစီစီ ခြှခြှေတောတာသုံးကွရတာပါ။အမှနျက လူ့အရပွေားဟာ ၂၀ နဲ ၂၅ဒီဂရီစငျတီဂရိတျ ကွားကအပူခြိနျမှာ နလေို့ထိုငျလို့အကောငျးဆုံးပါ။
ဒီတော့ အဲကှနျးကိုဖှငျ့တဲ့အခါမှာ၂၅ဒီဂရီမှာအပူခြိ နျကိုထိနျးညှိထားလိုကျခွငျးဟာမီတာခ အရမျးသကျသာသှားသလိုကနျြးမာရေးကိုလညျးမထိခိုကျစတေော့ပါဘူး။
အဲကှနျးကို တောကျလြှောကျသုံးပွီးမီတာခကို ဒီထကျ လြှော့ခခြငျြသေးတယျဆိုရငျလညျး ရပါသေးတယျ။ဒီနရောမှာအဲကှနျးရဲ့လုပျဆောငျခကျြနှဈခုထဲမှာ Compressor နဲ့ Condenser တှဟော လရေဲ့ပကတိအပူခြိနျကိုဖယျရှားပွီး အေးမွအောငျလုပျပေးသလို Evaporator က လထေုထဲက ရငှေကေို့ဖယျရှားပွီးအခနျးထဲကဘအပူတှကေိုဖယျပေးတာပါ.
အခုခတျေအဲကှနျးတှမှော Cool Mode သာမက Dry Modeဆိုတာပါ ပါပါတယျ။
Cool Modeမှာ Evaporator Compressor နဲ့ Condenser တှအေားလုံးအလုပျလုပျပွီး အခနျးတှငျးက လကေိုအေးမွစပေါတယျ။Dry Mode မှာတော့ လထေုထဲကရငှေကေို့ဖယျရှားပေးဖို့Evaporatorသာအလုပျလုပျတဲ့အတှကျ ဓာတျအားသုံးစှဲမှု ပိုနညျးပါတယျ။
ဒီတော့အခုလိုအပူခြိနျသိပျမမွငျ့လှသျောလညျးပူအိုကျစှတျစိုထိုငျးမှိုငျးတဲ့မိုးရာသီမှာအဲကှနျးကို Cool Mode နဲ့မသုံးဘဲ Dry Mode ကို ၂၅ ဒီဂရီလောကျမှာထားပွီးFan Speed ကိုလညျး လြှော့ပွီးသုံးမယျဆိုရငျအခနျးတှငျး ရငှေပေ့ါဝငျနှုနျးကို လြှော့ခပြေးတဲ့အတှကျအခနျးတှငျးမှာမှိုမတကျခွငျးရောဂါပိုးမှားတှမေပေါကျပှါးနိုငျခွငျး
လူ့အရပွေားကခြှေးတှကေိုအလှယျတကူအငှပွေ့နျစလေို့အေးမွမှုကို Cool Mode နဲ့အအေးခံထားသညျ့အလားခံစားရစခွေငျး
၂၅ ဒီဂရီလညျးဖွဈပွနျ Dry Mode လညျးဖွဈပွနျလို့မီတာခသကျသာခွငျးစတဲ့အကြိုးတှကေိုခံစားရမှာဖွဈကွောငျး လကျတှေ့ နှိုငျးယှဉျ စမျးသပျနိုငျစဖေို့စိုးလြှပျစဈမှမြှဝလေိုကျရပါတယျ.
အဲယားကှနျးကို16မှာထားတာရငျလဲဒီလပေဲ 30 မှာထားလဲဒီလပေဲထှကျပါတယျနျော.အလုပျလုပျခြိနျပိုကွာသှားလို့ပိုအေးတာပါ.အခွားသောလြှပျစဈပစ်စညျးတှကေိုလညျးအထာသိပွီးသတိထားအသုံးပွုရငျလြှပျစဈကို ခြှတောနိုငျပါလိမျ့မယျ။
အသအေခြာ ရှငျးပွပေးတဲ့ မူရငျးရေးသားသူ ကိုရှယေုကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ
Previous articleသစ်တံခါးဆရာတော်ကြီးပေးတဲ့ အဓိဌာန်ကြောင့် လိုချင်တာတွေရပြီး ကံကောင်းခဲ့ရတာပါဆိုတဲ့ စမိုင်းလ်
Next articleSong Song Couple ကွာရှင်းတာက Park Bo Gum ကြောင့်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အေဂျင်စီမှ သတိပေး